Mpikatroky Ny Zon’Olombelona Voampanga Ho Manao Fampihorohoroana · Global Voices teny Malagasy
Ebtisam Al-Saegh no anaran'Ilay Barhainita
Voadika ny 25 Jolay 2017 4:20 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, English, Italiano, Español, English
Mandrisika ny manampahefana Bahrainita mba hamotsotra an'i Ebtisam al-Saegh, ny Vondrona Iraisampirenena sy ara-paritra miaro ny zon'olombelona, anisan'izany ny Foibe Helodrano miaro ny Zon'Olombelona sy ny Amnesty International. Sary: Amnesty International
Voampanga teo ambany lalànan'ny fampihorohoroana ao Bahrain ilay Bahrainita mpikatroka malaza mpiaro ny zon'olombelona Ebtisam Al-Saegh. Notanan'ny polisy nandritra ny telo herinandro izy taorian'ny fisamborana azy noho ny asany miaraka amin'ny , Al Karama Foundation vondrona mpiaro ny zon'olombelona ao Geneva.
Tamin'ny 18 Jolay, nanome baiko ny fisamborana azy hotazonina mandritra ny enim-bolana miandry fanadihadiana ny mpampanoa lalàna Bahrain, ary niampanga azy ho “manao ny asam-panandratana ny zon'olombelona ho fanafenana ny fifandraisany sy ny fiarahany miasa amin'ny Fikambanana “Al Karama Foundation.”
Mpandrindra tambajotra ao amin'ny Salam ho an'ny Demaokrasia sy ny Zon'Olombelona i Al-Saegh, ka mandrakitra sy manomana tatitra momba ny fanitsakitsahana zo no asany ao. Mpikambana ao amin'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona, Mpanaramaso ny Zon'Olombelona ao Bahrain (BHRO) ihany koa izy. Tamin'ny volana Martsa, nandray anjara tamin'ny Vaomieran'ny Firenena Mikambana momba ny Zon'Olombelona tany Genève izy. Nosamborin'ny mpitandro ny filaminana fanindroany, izay niditra an-keriny tao an-tranony tamin'ny 3 Jolay izy tao anatin'ny roa volana latsaka.
Taloha kelin'ny misasakalina, fiara dimy sy kamiao kely no tonga tao an-tranony miaraka amin'ny mpitandro filaminana mitam-piadiana, voalaza fa an'ny Sampam-pitsikilovam-pirenena ao Bahrain (NSA), ary nanafika ny tranony tsy misy didy fampisamborana. Nalain'izy ireo teo am-pelantanan'ny vady aman-janany izy.
Araka ny tatitra voarain'ny vondrona manam-pahaizana momba ny zon'olombelona ao amin'ny Firenena Mikambana, niharan'ny fikarakarana ratsy sy fakàna am-bavany ela be i Al-Saegh, ary natokan-toerana tao amin'ny Foibe Fanagadràna Vehivavy Isa.
Natao ny fisamborana azy herinandro monja taorian'i niaretan'i Al-Saegh fampijaliana sy fanararaotana nataon'ny NSA. Tamin'ny 27 May, voantso tany amin'ny tobin'ny polisy Muharraq izy hohadihadiana momba ny asany amin'ny zon'olombelona. Nosamborina avy hatrany izy, ary nitatitra ny Foibe Helodrano ho an'ny Zon'Olombelona fa nampijaliana sy niharan'ny herisetra ara-nofo nataon'ireo mpikambana ao amin'ny NSA izy. Nandrahona hamono azy sy ny zanany ihany koa ny mpitandro ny filaminana. Navotsotra izy fito ora taty aoriana, ary tsy maintsy nandeha mivantana tany amin'ny hopitaly noho ny ratra ara-tsaina nahazo azy.
Taorian'ny famotsorana azy, nanameloka mafy ireo fanao tsy ara-dalàna i Al-Saegh, namaritra azy ireo tao amin'ny Twitter toy ny “heloka bevava atao amin'ny olombelona.”
Tamin'ny 26 Jiona, tamin'ny Andro Iraisam-pirenena ho Fanohanana Ireo Lasibatry ny Fampijaliana, nisioka izy hoe:
, I demand Punish to those who tortured me #bahrainpic.twitter.com/gYZDcXjimE
Nampijaliana aho satria mpiaro ny zon'olombelona,
Mangataka sazy ho an'ireo nampijaly ahy aho
Niharan'ny herisetra, nogadraina sy nosakanan'ny manampahefana Bahrainita i Al-Saegh tsy hivoaka any ivelany noho ny katroka milamina sy ara-drariny fandalàna ny zon'olombelona nataony taloha. Rehefa niverina tao Bahrain izy taorian'ny fandraisany fitenenana momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao amin'ny fireneny tamin'ny fivoriana faha-34 ny Vaomieran'ny Firenena Mikambana momba ny Zon'olombelona tao Genève tamin'ny volana Martsa, natao famotorana adiny dimy tao amin'ny seranam-piaramanidina izy, ary nalaina an-keriny avy eo ny pasipaorony.
Imbetsaka ny manampahefana no nangataka azy mba tsy “hihoatra ny tsipika mena”, na amin'ny teny hafa, mba hanajanona ny fikatrohany handala ny zon'olombelona.
Na dia eo aza ny fandrahonana sy ny fihoaram-pahefana niaretany teo am-pelatanan'ireo fitaovam-piarovana Bahrainita, tsy nety nangina izy ary nanohy nampiasa ny feony mba hitaky fahalalahana sy hoavy mananjara ho an'ny Bahrainita rehetra.
Ny Foibe Helodrano mandala ny Zon'Olombelona dia mangataka amin'ireo mpanohana azy mba hisioka amin'ny teny Anglisy na Arabo, mitaky ny manam-pahefana ao Bahrain mba:
Hamotsotra avy hatrany sy tsy misy fepetra an'i Ebtisam Al-Saegh;
Mandritra ny fanagadrana azy, mamela an'i Ebtisam Al-Saegh hahazo fitsaboana ara-pahasalamana, ary koa fihaonana sahaza amin'ny fianakaviany sy ny mpisolovava azy; sy
Miantoka ao anatin'ny toe-javatra rehetra fa afaka manatontosa asa ara-dalàna tsy amin-tahotra famaizana ny mpandala ny zon'olombelona ao Bahrain ary tsy iharan'ny fameperana tahaka ny herisetra ara-pitsarana.
Afaka misioka amin'ny Minisitry ny Atitany ao Bahrain (@moi_Bahrain) sy ny Minisitry ny Fitsarana sy ny Raharaha Islamika (@Khaled_Bin_Ali) ireo mpanohana.